Mareykanka iyo Taliban oo Heshiis kala Saxiixday
Mareykanka ayaa kooxda Taliban la saxiixday heshiis taariikhi ah maanta oo Sabti ah taasi oo u gogol xaari kareysa in ciidamada shisheeye ay ka baxaan dalka Afghanistan 14-ka bilood ee soo socda taasi oo soo afjareysa colaadda 18 sano jirsatay ee dalkaasi.
Inkasta oo heshiiskani uu qeexayo in Mareykanku uu si tartiib tartiib ah uga baxo dalkaasi Afghanistan, wadahadallada dhinacyada Afghanistan ayaa noqon kara kuwa aad u adag.
Heshiiskan ayaa waxaa ku kala saxiixday caasimadda Qatar ee Doha, ergayga wadaxaajoodka ee Mareykanda Zalmay Khalilzad iyo madaxa siyaasadda ee Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.
Xoghayaha Arrimaha Debedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa goob jog ka ahaa munaasabadda saxiixa heshiiskan.
Xoghayaha Difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa u duulay magaalada Kabul, booqasho ay khubaradu ku sheegeen in looga gon leeyahay sidii xukuumadda Afghanistan loogu xaqiijin lahaa ka go’naanshaha Mareykanka ee taageerada dalkaasi.
Haddaba, ahmiyadda heshiiskan ayaa Nuur Bukhaari uu ka wareystay Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo barre ka ah jaamacadda Qatar.
Mareykanka iyo Taliban oo heshiiyey